"မြေအောက်ရေကို တာ၀န်ရှိ အစိုးရက ကာကွယ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်း ၅ ခု" - Myanmar Water Portal
News Burmese Articles Education
မြေအောက်ရေသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပေါများဆုံး ရေချိုအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့် မိုးခေါင်မှုကဲ့သို့သော ရေကြီးရေလျှံမှုများ၏ အရေးပါသော ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်၌ ထိုအချက်က ပျောက်ကွယ်ဝှက်နေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အနည်းငယ်မျှ ဂရုပြုကြပါသည်။ တကယ်တော့ အဲဒါကို သတိမထားမိဘဲ ဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ နည်းနည်းလောက် ဘက်စောင်းရာလည်း ဖြစ်နေသည်။
မြေအောက်ရေကို လက်ရှိချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူ ကမ္ဘာကြီးသည် ကပ်ဘေးသို့ ဦးတည်နေကြောင်း အသိပေးချက်ကို မြေအောက်ရေနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ဆောင်မှုအတွက် 2020 ခုနှစ် Stockholm Water Prize ချီးမြှင့်ခံရသော ဒေါက်တာ ဂျွန်ချယ်ရီ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။(ဒေါက်တာ ဂျွန်ချယ်ရီသည် ကမ္ဘာကျော် ဇလဗေဒ ပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းခြင်းမှ ခြိမ်းခြောက်မှု ဆိုင်ရာ နှင့် ပတ်သက်မှုကို လေ့လာသော ထိပ်တန်း အာဏာပိုင် တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မြေအောက်ရေထဲသို့ ဓာတုပစ္စည်းများနှင့် အညစ်အကြေးများ မည်ကဲ့သို့ စိမ့်ဝင်သွားသည်ကို ပြသသည့် ပညာရပ်နယ်ပယ်တွင် ညစ်ညမ်းသော ဇလဘူမိဗေဒကို ဖန်တီးသူအနေဖြင့် သူသည် မြေအောက်ရေ သုတေသန၏ သိပ္ပံဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် )။ အောက် ဖော်ပြပါအချက်များသည် ဒေါက်တာ ဂျွန်ချယ်ရီမှ တိုက်တွန်းသော မြေအောက်ရေ အတွက် ခေတ်ရေစီးကြောင်းကို ပြောင်းပြန်လှန်ရန် အစိုးရများ လုပ်ဆောင်သင့်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ငါးခုဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာမူကို ကျင့်သုံးပါ။ (Apply the Precautionary Principle)
မြေအောက်ရေအတွက် ဆိုးရွားသော အခြေအနေသည် မလိုလားအပ်သော အကျိုးဆက်များစွာ၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါ။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ အခြေခံမူ PP (The precautionary principle ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနိယာမသည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် နီးကပ်စွာဆက်စပ်နေပြီး ၎င်းတွင် ကဏ္ဍသုံးရပ်ပါဝင်သည်- အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှု ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတို့ကြား ချိတ်ဆက်မှု တို့ဖြစ်သည်။) သည် မြေအောက်ရေ စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ရမည်.
(၂) ပုခက်မှ ပုခက်ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ ပြောင်းပါ။ (Shift to cradle-to-cradle production)
ယနေ့လက်ရှိ ပုခက်တွင်းမှ သင်္ချိုင်းရောက်သည်အထိ မြေအောက်ရေသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များမှ အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများအတွက် သင်္ချိုင်းအဖြစ် အဆုံးသတ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် cradle-to-cradle တွေးခေါ်မှု (ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဥ◌်)က ပိုအဖြစ်များလာပြီး ရှေ့ဆက်ရမယ့်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ upcycle စက်ဝိုင်းစီးပွားရေးတွင် ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များသည် ရေကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဓာတုပစ္စည်းများကို ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိပေ။
(၃) အစားအသောက်အလေ့အထကို ပြောင်းလဲခြင်း (Change food habits)
မြေအောက်ရေ လျော့နည်းမှု အားလုံးနီးပါးနှင့် မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှု အများစုသည် 'ခေတ်မီ ဓာတုစိုက်ပျိုးရေး' ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဂေဟစနစ်စိုက်ပျိုးရေးသည် အစားအစာအတွက် cradle-to-cradle တွေးခေါ်မှု (ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဥ်ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသလို အမဲသား အလွန်အကြူး စားခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မြေအောက်ရေ ညစ်ညမ်းမှုအပေါ် အခွန်များ စည်းကြပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အစိုးရကပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ပြီး မြေအောက်ရေ ရေရှည်တည်တံ့မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။
(၄) ထိရောက်သော မြေအောက်ရေ စောင့်ကြည့်မှု ထူထောင်ခြင်း (Establish effective groundwater monitoring)
မြေအောက်ရေသည် အရေးပါသော အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် နေရာတိုင်းတွင် ဒေတာပွင့်လင်းမြင်သာမှုဖြင့် မြေအောက်ရေအဆင့်နှင့် ရေအားလျှပ်စစ်အတွက် ခေတ်မီစောင့်ကြည့်ရေးနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပေသည်။ ထိရောက်သော စောင့်ကြည့်ရေးကွန်ရက်များသည် ရှားပါးနေသေးသော်လည်း အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ဒေတာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနည်းပညာ အပါအဝင် ခေတ်မီကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော နည်းလမ်းများ ရှိနေပါသည်။ ကိစ္စအများစုတွင် အများသူငှာက စမတ်ဖုန်းများ သို့မဟုတ် တက်ဘလက်များတွင် ကြည့်ရှုရန် ဒေတာကိုလည်း အပြည့်အဝရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(၅) မြေအောက်ရေ စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု အားကောင်းစေခြင်း (Strengthen groundwater governance)
မြေအောက်ရေ လျော့နည်းခြင်းနှင့် လေထုညစ်ညမ်းမှုသည် မကြာခဏဆိုသလို မြေအောက်ရေနှင့်ပတ်သက်သည့် အသိပညာနည်းပါးခြင်းကြောင့် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှု ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ မြေအောက်ရေဆိုင်ရာ သိပ္ပံပညာကို ပိုမိုလက်လှမ်းမီစေရန် လိုအပ်သည်။ ဥပမာ- မြေအောက်ရေ စီမံကိန်း(online platform အခမဲ့ အွန်လိုင်းစာအုပ်များ ၊ ပညာရေးလမ်းညွန်ချက်များ)ဖြင့် မြေအောက်ရေ စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်အစရှိသဖြင့် ပရောကျက်များ ဆက်လက်ဖြစ်ထွန်းနေဖို့ လိုအပ်သည်။
Translated by- Shwe Yati Su (The Water Agency)
Launch of UN World Water Development Report and co...
Internship Opportunities: Expand Your Knowledge in...
Climate Change Drinking Water Waste Water Ecosystem Services Groundwater Flooding Dams & Bridges Urban Development Integrated Water Resources Management Water Quality